Samuel Barclay Beckett: onye amamihe Irish nke ihe nkiri nke ihe nzuzu | Akwụkwọ ugbu a
Juan Ortiz | 29/09/2021 23:01 | Akụkọ ndụ, Novela, Abụọ, Aterlọ ihe nkiri
Okirikiri ala Irish.
Samuel Barclay Beckett (1906-1989) bụ onye edemede Irish ama ama. O mere nke ọma n'ụdị edemede dị iche iche, dịka abụ, akwụkwọ ọgụgụ na ihe nkiri. Na arụmọrụ ya na ngalaba ikpeazụ a, ọrụ ya Na-eche Godot nwere ọmarịcha ihe ịga nke ọma, ma taa, ọ bụ akara n'ime ụlọ ihe nkiri nke nzuzu. Mgbalị dị ịrịba ama na ogologo ọrụ ya - nke ama ama na ịdị omimi nke ihe odide ya - nwetara ya Nrite Nobel maka Akwụkwọ na 1969.
Eji mara becket site n'iji ụzọ ọjọọ, ọchịchịrị na nkenke nke mmadụ, na -ekwusi ike na enweghị ebumnuche ịdị adị ha. N'ihi ya, ọtụtụ ndị nkatọ wepụtara ya n'ime nihilism. Agbanyeghị na ederede ya dị mkpụmkpụ, onye ode akwụkwọ jisiri ike nye nnukwu omimi site n'iji akwụkwọ ọgụgụ dị iche iche, ebe onyogho ndị ahụ pụtara ihe karịa ihe ọ bụla ọzọ. Ikekwe onyinye kachasị mkpa ya n'akwụkwọ na -emebi ọtụtụ iwu enyere ruo mgbe ọ bịarutere.
1 Nkọwa nkọwa nke onye edemede, Samuel Beckett
1.1 Childhoodmụaka na ọmụmụ ihe
1.2 Beckett, onye polymath
1.3 Beckett, ụlọ ihe nkiri na njikọ chiri anya ya na James Joyce
1.4 Becket na ide
1.4.1 Ọnwụ nna ya
1.5 Ikpe ikpe "Sinclair v. Gogarty" na mwepụ nke Beckett
1.6 Paris: ịhụnanya ịhụnanya, ịkpọtụrụ ọnwụ na nzute ịhụnanya
1.7 Beckett na Agha Ụwa nke Abụọ
1.8 Afọ 40 na 50 na ike akwụkwọ ọgụgụ nke Beckett
1.9 Mbipụta nke Ichere Godot
1.10 Beckett: mmadụ dara ada
1.11 Nobel, njem, nnabata na ọpụpụ
1.12 Nkwupụta banyere ọrụ Becket
2 Ọrụ ndị a bụ Samuel Beckett
2.1 Aterlọ ihe nkiri
2.3 Short akwụkwọ
2.4 Akụkọ ifo
2.6 Akụkọ, colloquia
Nkọwa nkọwa nke onye edemede, Samuel Beckett
A mụrụ Samuel Barclay Beckett na Fraịde Eprel 13, 1906 na mpaghara Dublin nke Foxrock, Ireland. Ọ bụ nwa nke abụọ nke alụmdi na nwunye dị n'etiti William Beckett na May Roe - onye nyocha na nọọsụ n'otu n'otu. Banyere nne ya, onye ode akwụkwọ na -echeta mgbe niile nraranye maka ọrụ ya na nraranye okpukpe ya a ma ama.
Childhoodmụaka na ọmụmụ ihe
Site n'oge ọ bụ nwata, Beckett nwere ọmarịcha ahụmịhe ole na ole. Ma ọ bụ na, megidere nwanne ya nwoke Frank, onye edemede ahụ dị gịrịgịrị ma na -arịakarị ọrịa. Banyere oge ahụ, o kwuru otu oge: "Enwere m obere talent maka obi ụtọ."
Mgbe ọ na -aga agụmakwụkwọ izizi ọ nwere ụzọ dị mkpirikpi na ọzụzụ egwu. Ntụziaka izizi ya mere na Earlsford House School ruo mgbe ọ gbara afọ 13; na -esote Edebanyere aha ya na Portora Royal School. Na saịtị a, ọ zutere Frank, nwanne ya nwoke nke okenye. Ruo taa, ụlọ akwụkwọ ikpeazụ a nwere nnukwu ugwu, kemgbe onye ama ama Oscar Wilde hụkwara klaasị na klaasị ya.
Beckett, onye polymath
Nzọụkwụ ọzọ na nhazi Beckett weere ọnọdụ na Trinity College, Dublin. N'ebe ahụ, ọtụtụ akụkụ ya pụtara, agụụ maka asụsụ bụ otu n'ime ha. Banyere ihe omume ntụrụndụ a, ọ dị mkpa imesi ya ike na onye dere ya e nyere ọzụzụ na Bekee, French na Italian. O mere ya kpọmkwem n'agbata afọ 1923 na 1927, ma mechaa gụchaa ya na Philology Modern.
Abụọ n'ime ndị nkuzi asụsụ ya bụ AA Luce na Thomas B. Rudmose-Brown; Nke ikpeazụ a bụ onye meghere ọnụ ụzọ nke akwụkwọ French wee gosi ya ọrụ Dante Alighieri. Ndị nkuzi abụọ ahụ kwupụtara ihe ijuanya ha maka ịdị mma Beckett na klaasị, ma na usoro iwu ma n'omume.
N'ime ogige ọmụmụ ihe a, a hụkwara onyinye egwuregwu ya nke ọma, kemgbe Beckett mere nke ọma na chess, rugby, tennis, na - nke ukwuu - na cricket.. Ọrụ ya n'egwuregwu ụsụ na bọọlụ bụ nke aha ya pụtara na Almanack nke Wisden Cricketers.
Na mgbakwunye na nke ahụ e kwuru n'elu, onye edemede ahụ abụghịkwa onye ọbịa na nka na omenala n'ozuzu ya. Banyere nke a, n'akwụkwọ James Knowlson - otu n'ime ndị na -ede akụkọ ndụ ama ama - polymathy Samuel ka ekpughere nke ọma. Ma ọ bụ na ịkpa agwa dị iche iche nke Beckett bụ ihe ama ama, ọkachasị maka ọmarịcha ụzọ o si edozi onwe ya na azụmaahịa ọ bụla ọ na -eme.
Beckett, ụlọ ihe nkiri na njikọ chiri anya ya na James Joyce
Na Trinity College, Dublin, ihe mere nke dị oke mkpa na ndụ Beckett: nzute ya na ọrụ ihe nkiri nke Luigi pirandello. Onye edemede a Ọ bụ akụkụ dị mkpa na mmepe Samuel mechara bụrụ onye na -ede egwuregwu.
Mgbe e mesịrị, Beckett mere kọntaktị mbụ ya na James Joyce. O mere n'oge otu n'ime ọtụtụ nnọkọ bohemia n'obodo, ekele maka ịrịọ arịrịọ Thomas MacGreevy Enyi Samuel - onye webatara ha. Chemistry dị n'etiti ha bụ ozugbo, nke ahụ dịkwa mma, ebe ọ bụ na ha abụọ hụrụ ọrụ Dante n'anya na ndị ọkà mmụta gbasara mmụọ.
Nzute Joyce bụ isi maka ọrụ na ndụ Beckett. Onye ode akwụkwọ ahụ ghọrọ onye enyemaka nye onye edemede na-emeri ihe nrite, yana onye dị nso na ezinụlọ ya. N'ihi njikọ ahụ, Samuel nwere ụdị mmekọrịta ya na Lucia Joyce - ada Jame.Ee - mana ọ gwụchaghị nke ọma - n'eziokwu, ọ kwụsịrị ịrịa ọrịa isi mgbaka.
Ozugbo, n'ihi "enweghị ịhụnanya" ahụ, e nwere esemokwu n'etiti ndị edemede abụọ ahụ; agbanyeghị, mgbe otu afọ gachara ha gafere. N'ime ọbụbụenyi a, ekele na otuto otuto Joyce bịara ime bụ ihe a ma ama. gbasara arụmọrụ ọgụgụ isi Beckett.
Becket na ide
Dante… Bruno. Vico… Joyce bụ ederede mbụ Beckett bipụtara. Ọ pụtara na 1929 na ọ bụ edemede dị mkpa site n'aka onye ode akwụkwọ nke ga -abụ akụkụ n'ahịrị nke akwụkwọ ahụ Nkọwapụta anyị gbara gburugburu ihe nrụpụta ya maka mmetọ ọrụ na -aga n'ihu - Ederede gbasara ọmụmụ ọrụ James Joyce. Ndị edemede ndị ọzọ ama ama dekwara aha ahụ, gụnyere Thomas MacGreevy na William Carlos Williams.
N'etiti otu afọ ahụ, ọ bịara pụta ìhè Akụkọ mbụ nke Beckett: Ebum n'uche. Magazin mgbanwe bụ ikpo okwu kwadoro ederede. Oghere akwụkwọ avant-garde dị oke mkpa na mmepe na njikọta ọrụ ndị Irish.
Na 1930 ọ bipụtara egwu Igwe igwe, ntakịrị ederede a nwetara ya otuto obodo. N'afọ sochirinụ ọ laghachiri na Trinity College, mana ugbu a ọ bụ prọfesọ. Ahụmahụ nkuzi adịteghị aka, ebe ọ hapụrụ afọ ahụ ma rara onwe ya nye ịgagharị na Europe. N'ihi nkwụsị ahụ, o dere abụ a Gnome, nke e bipụtara n'akwụkwọ iwu afọ atọ ka e mesịrị na Magazin Dublin. N'afọ sochirinụ e bipụtara akwụkwọ akụkọ mbụ, Arọ m nrọ ụmụ nwanyị na -enweghị fu ma ọ bụ fa (1932).
Ọnwụ nna ya
Na 1933 otu ihe mere nke mere ka Beckett maa jijiji: ọnwụ nna ya. Onye ode akwụkwọ ahụ amaghị ka esi edozi ihe ahụ merenụ nke ọma wee hụ ọkachamara n'akparamàgwà mmadụ - Dr. Wilfred Bion.. Ụfọdụ edemede nke onye dere ya makwara site n'oge ahụ. N'ime ndị a, enwere otu ọkachasị nke pụtara: Ịdị jụụ nke mmadụ (1934), n'ahịrị ya nke o mere nyocha dị oke mkpa banyere nchịkọta abụ site n'aka Thomas MacGreevy.
Ikpe ikpe "Sinclair v. Gogarty" na mwepụ nke Beckett
Ihe omume a pụtara nnukwu mgbanwe na ndụ onye ode akwụkwọ, ebe ọ bụ na ọ dugara ya n'ụdị mpụga onwe ya. Ọ bụ esemokwu n'etiti Henry Sinclair - nwanne nna Samuel - na Oliver St. John Gogarty. Onye nke mbụ kwutọrọ nke ikpeazụ, na -ebo ya ebubo na ọ na -anara ọmụrụ nwa, Beckett bụkwa onye akaebe na ikpe ahụ ... nnukwu mmejọ.
Onye ọka iwu Gogarty jiri atụmatụ siri ike megide onye edemede ahụ mebie ya ma mebie ebubo ya. N'ime mmekpa ahụ ekpughere, ekweghị na Chineke Beckett na ịkwa iko ya pụtara. Omume a nwere mmetụta dị ukwuu na mmekọrịta mmadụ na onye edemede, n'ihi ya, o kpebiri ịga Paris., ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkọwa.
Paris: ịhụnanya ịhụnanya, ịkpọtụrụ ọnwụ na nzute ịhụnanya
Ihe e ji mara Beckett mgbe ọ banyere afọ iri atọ, na mgbakwunye na nnukwu mmepụta akwụkwọ ya, bụ ịkwa iko. Maka ya, Paris bụ ebe zuru oke iji mee ka ụmụ nwanyị mara mma ya. Otu n'ime ihe ndị ama ama ama na nke a bilitere n'etiti ngwụcha 1937 na mbido 1938, n'etiti mmemme tupu na ngwụcha afọ.
Site n'oge ahụ, amaara na Beckett nwere mmekọrịta ịhụnanya n'otu oge yana ụmụ nwanyị atọ. N'ime ndị a, otu pụrụ iche, ebe ọ bụ na, na mgbakwunye na ịbụ onye hụrụ ya n'anya, ọ bụ onye na -akwado onye edemede: Peggy Guggenheim.
Ihe ọzọ dị egwu nke mere mgbe m bụ onye ọhụrụ na Paris ọ bụ onye a mara mma (1938). Ọnya ahụ dị omimi wee metụta obi Beckett, onye a zọpụtara n'ụzọ ọrụ ebube. Onye wakporo ya bụ nwoke aha ya bụ Prudent, onye pimp mpaghara nke mechara bụrụ ikpe - ma onye ode akwụkwọ chere ya ihu - kwuru na ya amaghị ihe mere ya n'oge ahụ, na ọ na -ewute ya nke ukwuu.
A zọpụtara Beckett n'ihi ngwa ngwa James Joyce mere. Onye ode akwụkwọ mmeri ahụ kpaliri mmetụta ya wee chekwaa enyi ya ụlọ n'otu ụlọ ọgwụ nkeonwe. N’ebe ahụ, Samuel ji nwayọọ nwayọọ gbakee.
Suzanne Dechevaux-Dumesnil - Onye egwu na onye egwuregwu ama ama- mara ihe merenụYa mere, n'ime obere oge, ihe omume a bịara mara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na Paris niile. Ọ mere ihe atụ na Beckett nke ahụ ga -abụ njedebe ha enweghị nkewa ọzọ.
Afọ abụọ ka e mesịrị, na 1940, Beckett zutere maka oge ikpeazụ -amaghị na- con nwoke nke zọpụtara ndụ ya, ezigbo enyi ya na onye ndụmọdụ ya James ọrịre. Onye edemede Irish na-enweta ihe nrite nwụrụ n'oge na-adịghị anya, na mbido 1941.
Beckett na Agha Ụwa nke Abụọ
Beckett abụghị onye ọhụrụ maka ọgụ agha a. Ozugbo ndị Germany weghaara France na 1940, onye edemede ahụ sonyere na Nguzogide. Ọrụ ya bụ isi: iburu ozi; Otú ọ dị, n'agbanyeghị na ọ bụ ọrụ dị mfe, ọ ka dị ize ndụ. N'ezie, mgbe ọ na -arụ ọrụ a, Samuel kwupụtara na ọ nọ na -achọ ijide ndị Gestapo ọtụtụ oge.
Mgbe ekpughere ngalaba ahụ ejikọtara ya, ọ ga -abụrịrị na onye edemede ahụ gbapụrụ na Suzanne. Ha gara na ndịda, ọkachasị na Villa de Roussillon. Ọ bụ oge ọkọchị nke 1942.
N'ime afọ abụọ sochirinụ, ha abụọ - Beckett na Dechevaux - mere ka hà bụ ndị bi n'obodo. Ka o sina dị, n'ụzọ aghụghọ nke ukwuu ha raara onwe ha nye izobe ngwa agha iji jigide mmekorita ha na Nguzogide.; Ọzọkwa, Samuel nyeere ndị okpuru ọchịchị aka n'ọrụ ndị ọzọ.
Omume obi ike ya agabeghị n'efu na gọọmentị France, yabụ Beckett E mechara nye ya Croix de Guerre 1939-1945 na Médaille de la Résistance. N'agbanyeghi na n'ime ndị enyi ya iri asatọ naanị mmadụ iri atọ fọdụrụ, ma nọrọ n'ihe egwu ọnwụ ọtụtụ oge, Beckett echeghị na ya ruru eru inweta otuto dị otú ahụ.. Ya onwe ya kọwara omume ya dịka "ihe nwata scout".
Samuel Beckett kwuru
Ọ bụ n'oge a - n'etiti 1941-1945 - ka Beckett dere Watt, akwụkwọ akụkọ nke ebipụtara ka afọ 8 gachara (1953). Mgbe e mesịrị laghachiri Dublin obere oge, ebe - n'etiti ọrụ ya na Red Cross na izute ezinụlọ- dere ọrụ ọzọ a ma ama, ihe nkiri Mpempe ikpeazụ nke Krapp. Ọtụtụ ndị ọkachamara na -ekwu na ọ bụ ihe ndekọ onwe onye.
Afọ 40 na 50 na ike akwụkwọ ọgụgụ nke Beckett
Ọ bụrụ na ọ bụ ihe e ji mara akwụkwọ edemede nke onye Irish na XNUMXs na XNUMXs n'otu n'otu, nke ahụ bụ arụpụtaghị ihe ha. O bipụtara ọtụtụ ederede n'ụdị dị iche iche - akụkọ, akwụkwọ akụkọ, edemede, egwuregwu. Site n'oge a, ịkpọ aha iberibe ole na ole, kwụpụta akụkọ ya "Suite", akwụkwọ akụkọ Mercier na Camier, na ejije Na -eche Godot.
Akwụkwọ nke Na-eche Godot
Mpempe akwụkwọ a na -abịa afọ iri abụọ mgbe 'edemede edemede' ya bidoro na akwụkwọ akụkọ mgbanwe. Na -eche Godot (1952) - Otu n'ime ntụaka dị mkpa nke ụlọ ihe nkiri na -adịghị mma na nke gosipụtara tupu na mgbe ọ na -arụ ọrụ ya-.
Na -eche Godot: ...
Beckett: mmadụ dara ada
O doro anya na a na -egosipụta oke amamihe niile site na ngafe na omume na -agabiga ụkpụrụ edoziri. Beckett agbaghị nke a. A maara mmanya na -egbu ya na ịkwa iko. N'ezie uotu n'ime mmekọrịta ịhụnanya ya ama ama ugha la que Edebere ya na Barbara Bray. N'oge ahụ ọ na -arụrụ BBC ọrụ na London. Ọ bụ nwanyị mara mma nke nwere mkpụrụedemede raara nye idezi na ntụgharị asụsụ.
Enwere ike ikwu, n'ihi akparamagwa nke ha abụọ, na mmasị ha bụ ozugbo na enweghị ike ịkwụsị ya. Banyere njikọ a, James Knowlson dere, "Ọ dị ka Beckett nwere mmasị na ya ozugbo, dị ka ya maka ya. Nzukọ ha dị nnukwu mkpa maka ha abụọ, ebe ọ bụ mmalite mmekọrịta dị na nke Suzanne, nke ga -adịru ndụ niile ”.
Na n'ezie, n'agbanyeghị ịdị adị nke Suzanne, Beckett na Bray na -enwe njikọ mgbe niile. Agbanyeghị, mkpa Suzanne na ndụ Beckett abụghị ihe ịtụnanya - otu onye edemede kwupụtara ya ihe karịrị otu oge-; Ọbụna obere oge, na 1961, di na nwunye ahụ lụrụ. Njikọ ha fọrọ obere ka afọ iri atọ gachara.
"Enwere m ya niile Suzanne," a ga -ahụ ya na akụkọ ndụ ya; Ekwu okwu a siri ike mgbe ọnwụ ya dị nso.
Nobel, njem, nnabata na ọpụpụ
Oge fọdụrụnụ nke ndụ Beckett mgbe alụmdi na nwunye ya gasịrị n'etiti njem na nnabata. N'ime ọrụ ya niile sara mbara, dịka ekwuru,Na -achọ Godot bụ otu nọchiri anya oke nkwanye ugwu ya niile, gụnyere Nrite Nobel maka Akwụkwọ na 1969. Otu ihe na -adịghị eju anya n'ime agwa onye dere ya bụ mmeghachi omume ya mgbe ọ matasịrị na ọ nwetala nnukwu ihe nrite dị otú a: o kewapụrụ onwe ya na ụwa wee ghara ime ka ha mara ihe ọ bụla gbasara ya. Ka anyị kwuo na Beckett anaghị aga ụdị ụdị mgbakọ a.
Mgbe afọ iri abụọ na asatọ nke alụmdi na nwunye gasịrị, ebum n'uche ahụ mezuru tupu nke ha ekwenye isonye n'alụmdi na nwunye: "Ruo mgbe ọnwụ ga -ekewa." Suzanne ọ bụ onye mbụ nwụrụ. Ọnwụ ahụ mere nwụrụ na Mọnde, Julaị 17, 1989. Beckett, ka ọ dị ugbu a, ọ hapụrụ na njedebe dotu afọ ahụ, Fraịdee, Disemba 22. Onye dere akwụkwọ a bụ afọ 83.
Di na nwunye ahụ foduru na -eli ozu Montparnasse na Paris.
Nkwupụta banyere ọrụ Becket
“Beckett bibiri ọtụtụ mgbakọ nke akụkọ ifo na ihe nkiri nke oge a dabere; raara onwe ya nye, n'etiti ihe ndị ọzọ, iji mebie okwu ahụ dị ka ụzọ ngosi nka wee mepụta abụ uri, ihe nkiri na akụkọ ”Antonia Rodríguez-Gago.
“Ọrụ Beckett niile na -egosi nhụsianya nke ọnọdụ mmadụ na ụwa na -enweghị Chineke, enweghị iwu yana enweghị isi. Eziokwu nke ọhụụ gị, amamịghe asụsụ ha (n'asụsụ French na Bekee) emetụtala ndị na -eto eto na -ede akwụkwọ gburugburu ụwa" Encyclopedia of World Literature na narị afọ nke 20.
"Beckett jụrụ ụkpụrụ Joycean na ịmara karịa bụ ụzọ nke nghọta okike na ịchịkwa ụwa. Site ebe ahụ gawa Ọrụ ya gara n'ihu n'ụzọ nke mmewere, nke ọdịda, ije biri n'ala ọzọ na mfu; nke onye na -amaghị na onye kewapụrụ onwe ya ”, James Knowlson.
Banyere Ichere Godot: "O meela ihe agaghị ekwe omume: ihe nkiri nke enweghị ihe ọ bụla na -eme, nke na -eme ka onye na -ekiri ya rapara na oche. Kedu ihe ọzọ, ebe ọ bụ na omume nke abụọ abụghị ihe ọzọ karịa nitationomi nke mbụ, Beckett dere ihe nkiri nke, ugboro abụọ, ọ nweghị ihe na -eme ”, Aha ya bụ Vivian Mercier.
Ọrụ ndị a bụ Samuel Beckett
Aterlọ ihe nkiri
Eleutheria (nke e dere 1947; bipụtara 1995)
Na-eche Godot (1952)
Mee ihe n'ekwughị okwu (1956)
Ọgwụgwụ egwuregwu (1957)
Teepu ikpeazụ (1958)
O siri ike maka ụlọ ihe nkiri I. (afọ 50 gara aga)
O siri ike maka Ụlọ ihe nkiri II (afọ 50 gara aga)
Ụbọchị obi ụtọ (1960)
Bia bia (1965)
ume (wepụtara na 1969)
Ọ bụghị m (1972)
Oge ahụ (1975)
Ụkwụ ụkwụ (1975)
Ibe nke Monologue (1980)
Kedu ebe (1983)
Nrọ nke ịdị mma nye ụmụ nwanyị na -etinye ọnụ (1932; bipụtara 1992)
Ebere na Camier (1946)
Malone anwụ (1951)
Aha enweghị aha (1953)
Kedu ka ọ dị (1961)
Ndị Achụrụ achụ (1946)
Na -eme ka udo dị (1946)
Ndị furu efu (1971)
Ụlọ ọrụ (1979)
Ọrịa Ahụla Ka Ọrịa sịrị (1981)
Nke kacha njọ Ọ (1984)
Ahịa karịa karịa kicks (1934)
Akụkọ na ederede maka enweghị ihe ọ bụla (1954)
Lovehụnanya mbu (1973)
Mgbagwoju anya (1976)
Ụgha ka (1988)
Igwe igwe (1930)
Ọkpụkpụ Echo na ọdịda ọzọ (1935)
Poems anakọtara na Bekee (1961)
Ebubo anakọtara na Bekee na French (1977)
Kedu okwu (1989)
Mkparịta ụka atọ (1958)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Akụkọ ndụ » Samuel nwụrụ
Ọktoba. Nhọrọ nke akụkọ akụkọ
Ọnye na -bụ Antonio Buero Vallejo? Afọ ncheta ọmụmụ ya. Mpekere